သူနှင့် ကျွန်တော် | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » အမှတ်တရ » သူနှင့် ကျွန်တော်
သူနှင့် ကျွန်တော် စတင်သိကျွမ်းခဲ့သည်မှာ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀က မဟုတ်ခဲ့ချေ..။ စစ်တက္ကသိုလ် အနော်ရထာတပ်ရင်း ဒုတိယနှစ်မှ အမှတ် (၁၁) တပ်ခွဲနှင့် (၁၂) တပ်ခွဲ တစ်ခြမ်းစီ အတူနေ ကြ သော ငါးထပ် အိပ်ဆောင်ကျမှ အိပ်ဆောင်တူချင်း အဖြစ် စတင် မျက်မှန်းတမ်းမိခြင်းဖြစ်လေသည်.။ သုံးနှစ် သင်ကြားရသော ခေတ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ စီနီယာဝမ်း ဟုခေါ်တွင်သော ဒုတိယနှစ်ဗိုလ်လောင်းဘ၀ နှစ်ကုန်ပိုင်း အချိန်တွင်မူ သူနှင့် ရင်းနှီးလာခဲ့သည်.။ သို့ရာတွင် အကျွမ်းတ၀င်တော့ မရှိလှ.။
တတိယနှစ် ဗိုလ်လောင်းဘ၀ နှစ်စမှ ကျွန်တော်တို့ တပ်ခွဲ အောင်စစ်သည်ဆောင်သို့ မပြောင်းမီ ကာလ အတောအတွင်း တွင်မူ သူနှင့် အထိုက်အလျောက်ရင်းနှီးလာခဲ့သည်.။ ဂစ်တာတီးဝါသနာပါသူ များဖြစ် လေရာ. အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုရှိခဲ့ကြသည်.။ သူဝယ်ထားသော ဂစ်တာကလည်း ကျွန်တော်တို့ အိပ်ဆောင်တွင် အသံအကောင်းဆုံးဟု သတ်မှတ်ကြသည် ဖြစ်လေရာ. ဂစ်တာကောင်းမြင်လျှင် မနေနိုင်သော ကျွန်တော့်အ တွက် သူ့အခန်းသို့ဝင်ချည် ထွက်ချည်ရှိခဲ့သည်.။ သို့နှင့်ပင် ကျွန်တော်တို့ အဆောင်မပြောင်းခင် အောင်ပြည့်ဖြိုးငြိမ်းဟုခေါ်သော သူ၊ ကျွန်တော်၊ စိုင်းမျိုးသူ၊ မင်းမင်းထွန်းနှင့် သီဟတင်ငွေ (ယခုညီမင်းထွဋ်) တို့ပေါင်း၍ သုံးနှစ်သုံးမိုး ဟူသော အခွေတစ်ခွေတစ်ခု လုပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ကြဖူးသည်.။
ထို့နောက် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သုံးနှစ်သုံးမိုး အခွေလေး လူမသိသူမသိပင် ပျက်သွားခဲ့သည်…။ နောက်ပိုင်း ကျောင်းဆင်း ပြီးသည်အထိ ထိုကိစ္စ ပြန်မစ ဖြစ်ကြတော့…။ မိမိမှာလည်း အပေါင်း အဖော်သစ်များဖြင့် သူနှင့် အဆက်အသွယ်မရဖြစ်ခဲ့..။ သို့ရာတွင် မိမိ လေးစားချစ်ခင်သော သူငယ်ချင်းများ အမှတ်တရ ရေးသားထားသော စာအုပ်တွင်မူ သူ့လက်ရေး သေးသေးလေးတွေ ကျန်နေခဲ့သည်.။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့သော “ ငါဘယ်ဘုံမှာလဲ” ဆိုသည့် ဆောင်းပါးမှ “ လိပ်ပြာသန့်ခြင်းသည် အနူးညံ့ဆုံးခေါင်းအုံး ဖြစ်သည်” ဆိုသည့်စကားလေးကို သူ ရေးပေးခဲ့ဖူးသည်ကို မှတ်မိနေသေးသည်.။
သို့နှင့် သုံးနှစ်သုံးမိုးပြီးတော့ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိများအဖြစ် ချယ်ရီမိခင်ကို နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ တစ်လွှားသို့ အမိန့်နှင်ရာ လွှင့်ကြတော့သည်.။ ထိုအထိ သူနှင့် ကျွန်တော်က အရင်းနှီးဆုံးမဖြစ်ကြသေး.။ အဆက်အသွယ်လည်း မရှိကြ.။ သို့ရာတွင် ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ကျွန်တော်တို့ မဟာသိပ္ပံအရည်အချင်းစစ် သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အဆင့်မီသူများ ဗထူးတပ်မြို့မှာ ခြေလျင် တပ်စုမှူးသင်တန်းတက်ဖို့ ဖြစ်လာသည်.။ PC ဟု အလွယ်ခေါ်ကြသော သင်တန်းဖြစ်သည်.။ PC ရောက်တော့ သူနှင့်ကျွန်တော် ပြန်တွဲမိကြသည်.။ ထိုအချိန်တုန်းက သူက ကျွန်တော့်ကို ကွန်ပျူတာ ပြန်သင်ပေးသူ.။ ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ၊ ဖိုတိုရှော့ လို ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို ကောင်းကောင်း သုံးတတ်သူ.။ ထိုအချိန်ထိ မိမိက မြန်မာလက်ကွက်ကို အံကြိတ်ရိုက်နေရ တုန်း.။ (ထိုအချိန်က ကျွန်တော် ကိုဌေးလင်းနှင့် မတွေ့သေး) ။ သူနှင့် တွဲဖြစ်ကြရင်း. သူ့စိတ်ဓါတ် သူ့အကြောင်းတွေကို ပိုပို သိလာသည်.။ သူကလည်း မိမိလို စာဖတ်ဝါသနာပါသူ၊ မိမိထက်သာသည်က ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး.။ သူငယ်ချင်း ငါးယောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ကြပြီဆိုပါတော့ ။ သူက အလိုလိုနေရင်းမည်သူမျှ မသတ်မှတ်ပါပဲ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားသည်.။ သူပြောသမျှ နှုတ်ထွက်စကားက သြဇာတိက္ကမ ရှိနေသည်.။ ဒီအချက်တွေက ကျွန်တော် သူနှင့်ယှဉ်လို့မရသောအချက်.။
“ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုအကဲခတ်ရတာ လွယ်တယ်ကွ..။ တစ်ချို့လူတွေက နည်းနည်းဇီဇာကြောင် တယ်.။ ဥပမာ သူတို့ ပစ္စည်းကို ယူကိုင်တာမျိုးဆိုရင် မကြိုက်ဘူးကွ.။ အဲဒီလိုလူတွေက ပေါင်းမကြည့်ရင် သိပ်မသိသာဘူး.။ ကိုယ်နဲ့သိပ်မပေါင်းဖြစ်တဲ့သူကို အကဲခတ်ချင်ရင်ကျတော့ အဲဒီလို အမှတ်တရ ပစ္စည်းတွေ ကို ကိုင်ကြည့်ရတယ်.”
“ ဟေ.. ဘယ်လို.ကိုင်ကြည့်ရမယ်လား..ဟုတ်လား အောင်အောင်.”
“ အင်းဟုတ်တယ်..။ လူတစ်ယောက်ကွာ သေတ္တာရှင်းနေတယ်.။ သူ့ကောင်မလေးပုံထည့်ထားတဲ့ Album တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ်.တစ်ခြားတစ်ခုခုပေါ့ကွာ .. မင်းက ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး.။ ကိုင်ကြည့်လိုက်တယ်.။အဲဒီ လိုကိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကျရင် မကြိုက်တဲ့သူက မင်းကို စကားတစ်ခုခု အရင်းမရှိ အဖျားမရှိ ထပြောလိမ့် မယ်.။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သူက သီချင်းတစ်ခုခု ညည်းလိမ့်မယ်.။ အဲဒီလိုမှ မလုပ်ခဲ့ရင် သူက သူ့အလုပ်ထဲကို အာရုံထားချင်ယောင် သိသိသာသာကို ဆောင်လိမ့်မယ်.သူငယ်ချင်းရ..”
“ ဟား မင်းက သေချာလှချည်လား..ငအောင်ရ.”
“သေချာတာပေါ့.။ မင်း အဲဒီလို လုပ်လိုက်တဲ့အခါ သူ့စိတ်ထဲက စိတ်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုက သာမာန်ထက် မြင့်သွားလေ့ရှိတယ်.။ အဲဒီအခါ Output အဖြစ် ခုနက ငါပြောတဲ့ အမူအယာတွေ ထွက်လာတာပဲ..”
သူပြောခဲ့သော စကားများ .။
ကျွန်တော်အရင်က ခုံခေါက်သည့်အကျင့်ရှိသည်.။ အဆောင်မှာ ဂစ်တာစုတီးကြပြီဆိုလျှင် ကျွန်တော် ဂစ်တာ မတီးသည့်အလှည့်များတွင် ကျွန်တော်က Drum beat အတိုင်း ခုံကို ခေါက်လေ့ရှိသည်.။ ထိုအကျင့် တစ်ခုရှိသည်.။
“ ခုံမခေါက်နဲ့ သူငယ်ချင်း.။ ခုံခေါက်တာ၊ ဒူးနှံ့တာ.။ ပါးစပ်ကို တင်းတင်းမစေ့ပဲ ခပ်ဟဟ လေးဖြစ်နေ တာမျိုးက Will power ရဲ့ ယိုပေါက်တွေကွ..” တဲ့..။
ရွှေအကြောင်း ဖယောင်းသက်သေ ဆိုသော်ငြား လူအကြောင်းသိရန်မူ ပေါင်းကြည့်မှ သိလာရသည်.။ မိမိတို့ သူငယ်ချင်းအုပ်စု အတွင်း ပေါင်းသင်းတာ ကြာလာသောအခါ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ကို သိလာရသည်.။ မည်သူက မိုးထဲလေထဲတွင် အနစ်နာခံလုပ်ပေးနိုင်သူ.၊ မည်သူက အတ္တကြီးသူ စသည်ဖြင့်.။ ထိုသို့ ပင် ရင်းနှီးလာရင်း တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိလာကြသလို သူနှင့် ကျွန်တော် ပို၍ ရင်းနှီး လာခဲ့သည်.။ သူနှင့် ကျွန်တော်က သွေးမနီးသားမစပ်၊ သူက မော်လမြိုင်သား၊ ကျွန်တော်က မေမြို့သား ။ သို့ပေတည့် ညီအစ်ကိုတွေလို ဖြစ်လာကြသည်.။
၂၀၁၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော် ပြင်ဦးလွင်ကို ဘာသာစကားသင်တန်းတက်ဖို့ ရောက်သည်.။ သူက ကျွန်တော့် အိမ်မှာတည်းသည်.။ အမေကပင် ခပ်တည်တည်နေ၍ စိတ်ရင်းကောင်းသော အောင်အောင့်ကို သဘောကျနေသေးသည်.။ သို့ရာတွင် ကံဆိုးစွာဖြင့် မိမိတို့ အပတ်စဉ်မှ ရုရှားသို့ လွှတ်သော အသုတ်တွင် သူတို့ Chemistry မေဂျာ မခေါ်.။ တစ်မေဂျာလုံး ကျန်ခဲ့ရသည်.။ ဒီမလာခင်သူက လိမ်လိမ်မာမာ နေဖို့ မှာလိုက်သေးသည်.။
“ အေးဆေးပါကွာ.. ။ ငါ့အကြောင်းမင်းသိပါတယ် ငအောင်ရာ..၊ မင်းသာ ငါမပြန်လာခင် မိန်းမ ယူဖို့ စိတ်မကူးနဲ့.။ မင်းမင်္ဂလာဆောင် ငါတက်ချင်သေးတယ်..”
ကိုယ့်လူရဲ့ ဇ ကို သိသူပီပီ လှမ်းနောက်ခဲ့သေးသည်.။ သူက သူ့ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးကွေ့များတွင် မိန်းက လေး များစွာတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှု ခံရသူကိုး.။
နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ဒီရောက်တော့ သူနှင့် မတွေ့ဖြစ်တော့.။ အစပိုင်းကတော့ သူတို့ အေးအေးချမ်း ချမ်းဖြစ်နေသည်ကိုကြားရသည်.။ တာဝန်များဖြင့်မအားမလပ်၍ တစ်ခါတစ်ရံမှ လာနှုတ်ဆက်ရှာသည်.။ ပြီး ခဲ့သည့်နှစ်က KIA နှင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်တော့ သူ ကျည်သင့်၍ ဆေးရုံတက်ရသည်.။ ကံအားလျော်စွာ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့.။ အသေးစားခွဲစိတ်မှုမျှ ဖြင့် ပြီးခဲ့သည်.။ နောက်ပိုင်း သတင်းတွေကြားလာရသည်.။ မနှစ်က ဖြစ်ခဲ့ သမျှ တိုက်ပွဲအားလုံးမှာ Fighter အကျဆုံးတပ် က သူတို့တပ် ဖြစ်နေသည်.။ အရာရှိငယ်တွေ၊စစ်သည် အကျ အဆုံး တွေ ကြားလာရသည်.။ သကောင့်သားဘာမှ မဖြစ်ဖို့တော့ ဆုတောင်းနေမိသည်.။ မိမိနှင့် တစ်ခွဲတည်း ဆင်းသူ တွေ.ကျသူကျ၊ ပြတ်သူပြတ်၊ အသိတွေထဲက အသက်ပေးလှူသွားသူတွေ ရှိလာတော့ ညီအစ်ကိုရင်းလို ဖြစ်သော သူ့ကို စိတ်ပူရသည်.။
တွေ့တော့လည်း ဒီနေ့မှပင် ပြန်တွေ့သည်.။ သူတင်ထားသော ဓါတ်ပုံက ဆံပင်တစ်ထွာလောက်၊ မုတ် ဆိတ်မွှေး၊ ပါးသိုင်းမွှေး ဗရဗျစ်နှင့် ပီဘိ တောစစ်သားကြီး၊ အာဂစစ်သားကြီး အသွင်.။ ရှေ့တန်းဆိုသည့် အရိပ် လက္ခဏာတွေဖြင့်.။ မိမိမှာ အားကျရုံကျ၍၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ပင် ရှက်ရွံ့သလိုလို.ဖြစ်မိသည်.။ “ ငါဘာလုပ်နေတာ လဲ ” ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးနေမိသည်.။ သူအစ်မ တပ်ကို ရောက်နေကြောင်းပြော၍ သူနှင့်စကား ပြောဖြစ် မှ မိမိနှင့် ပထမနှစ်က ဘေးချင်းကပ်လျက် ထိုင်ခဲ့သူ သူငယ်ချင်း တိုက်ပွဲကျသွားကြောင်းနှင့် သူရဘွဲ့ချီးမြှင့် ခံရ ကြောင်း၊ ရန်သူအလုံးအရင်း ချီတက်လာသည်ကို ရင်ဆိုင် ကုန်းမှ မဆုတ်တမ်းခံစစ်ဖြင့် အသေခံ တိုက်သွားကြောင်းကြားရတော့ ဂုဏ်ယူမိသလို စိတ်လည်း မကောင်းမိ.။
စကားတွေပြန်ပြောရင်း မိမိ မျက်ရည်ကျမိသည်.။ မသေမပျောက်ကောင်း ပြန်တွေ့သည့် သူငယ်ချင်း ကို တွေ့ရသည့် ၀မ်းသာမျက်ရည်၊ နောက်တစ်ခုက အသက်ပေးသွားသော သူငယ်ချင်း အတွက် စိတ်မကောင်းသည့် မျက်ရည်.။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ..။ စစ်သားပေပဲ.။ တိုင်းပြည်တာဝန် ဆိုသည်က တာဝန်၊ နယ်ပယ်၊ အတိုင်း အတာ ၊ အချိန် ကန့်သတ်လို့ရသည်မှ မဟုတ်ပဲ.။ ဟယ်ရီပေါ့တာ ကားကြိုက်သူ၊ ခင်ဌေးရီဟု နောက်ခေါ်ကြသည့် ကိုရီးယား မင်းသမီး Kim Tae Hee ကို ရူးသွပ်စွဲလမ်းသူ သူငယ်ချင်း…။ Dota ဂိမ်းကျွမ်းကျင်သူ၊ ဂစ်တာ တီးကောင်းသူ၊ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်သောက်သည်ကို မကြိုက်သူ၊ သေရွာပြန် သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်မည့် သူငယ်ချင်း.။
သူ့အကြောင်းတွေ တွေးနေရင်း. ဂုဏ်ယူစွာပင် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်း မိတော့သည်.။
(ရှေ့တန်းမှ ပီဘိ စစ်သားကြီးအသွင်နှင့် နောက်တန်းပြန်ကာ တပ်သို့အလည်လာသော အစ်မဖြစ်သူ နှင့် ပျော်မွေ့နေသောပုံ ဖြစ်ပါသည်.။ မူရင်းဓါတ်ပုံရှင်များဖြစ်သော သူငယ်ချင်းအောင်ပြည့်ဖြိုးငြိမ်းနှင့် အစ်မဖြစ်သူ မစုမြတ်ငြိမ်းကို ခွင့်တောင်းပြီး ဖော်ပြပါသည်.)
အခြား ရင်တွင်းဖြစ်တည်မှု..., အမှတ်တရ
Labels: ရင်တွင်းဖြစ်တည်မှု..., အမှတ်တရ
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) July 12, 2013 at 9:41 AM
အေးဗျာ ဖတ်ပြီးသွားတော့ လည်း
ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးသလိုလို ဝမ်းနည်းသလိုလိုပဲဗျ ။
ထာဝရ ရှင်သန်နေမှာပါ ။